चितुवाले आक्रमण गरेपछि...
18 Aug 2019 | आइतबार, १ भदौ, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
सोमबार, ९ बैशाख, २०७६
अछाम । चितुवाको आक्रमणबाट जिल्लाको पञ्चदेवल–विनायक नगरपालिका–२ का १५ वर्षीय अम्बरबहादुर धामी घाईते छन् । घर नजिकै रहेको लिती सल्लेरी सामुदायक वनमा बाख्रा चराउन गएको बेला चितुवाले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको परिवारले जानकारी दिएको छ ।
चितुवाले बाख्रालाई आक्रमण गर्न खोज्दा उसलाई धपाउन खोज्दा आफुलाई आक्रमण भएको घाइते बालकले परिवारलाई जानकारी दिएका छन् ।
घाइतेको धामीको अनुहारको देब्रे भाग र बाँया हातमा गहिरो चोट लागेको छ । घाइतेको विनायकस्थित स्वास्थ्य चौकीमा हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल मंगलसेन ल्याइएको छ ।
अरुबाट आशा गर्दै नगर्नुहोस्
‘बीच जंगलमा दोबाटो भेटियो । बाटाहरु एक अर्काबीच छुट्टिए । मैले बेचल्तीको बाटो रोजें । सारा फरक त्यसैले पारिदियो ।’ –रबर्ट फ्रस्ट
अष्ट्रेलिया विशेषः यसरी ढुकुटी खेल्नु कत्तिको जोखिमपूर्ण हुन्छ ?
साथीहरुले महिनाको ५०० डलरको ढुकुटी खेलौं भनेर निकै दवाव दिइरहेका छन् । तपाईंको विचारमा यसरी ढुकुटी खेल्नु कत्तिको जोखिमपूर्ण हुन्छ ?
बोक्सी हटाउन महिला झाक्रीको १२ अवतार हेर्नुहोस तस्विरमा
दोलखा। जनैपूर्णीमा अवसर पारेर दोलखा जिल्लाका बिभिन्न गाउँबस्तीमाहरुमा कुल देवीदेवताको पुजा तथा झाँक्री मेलाले लागेको छ ।
पति–पत्नीको सम्बन्धलाई सँधै कसिलो राख्ने तीन उपायहरु
एजेन्सी । आजभोली धेरैजसो मानिसको वैवाहिक जीवनमा आपसी तालमेलमा कमी आएको पाइन्छ । जसकारण पति तथा पत्निले मानसिक तनाव तथा अन्य समस्याहरु झेल्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा जीवन बोझ लाग्छ भने निराशा हावी हुन्छ । यस्तो परिस्थितिबाट बच्नका लागि पति तथा पत्नी दुवैैले कस्तो उपाय अपनाउने भनेर मुख्य तीन कुराहरुको चर्चा गरौं ।
यस्तो रहेको छ आजको तपाईको भाग्य– भाद्र १ गते
शाकाहारी भोजन भ्रम र फाइदा
६ वर्षका बालकले ३ हजारभन्दा बढि पटक ‘पुश अप’ लगाएपछि...
एजेन्सी । रुसका ६ बर्षीय बालक इब्राहिम ल्यानोभले अनौठो रेकर्ड बनाएका छन् । उनले दुई घण्टामा ३२७० ‘पुश अप’ लगाएर नौलो रेकर्ड बनाए । उक्त रेकर्डलाई ‘रशियन बुक अफ’ रेकर्ड्समा सामेल गराइएको छ । यसैगरि उनी सामाजिक सञ्जालमाभाइरल भएका छन् ।
हातको बुढी औंलाले बताउँछ मानिसहरूको स्वभाव
कैदीको काम : खाना बनाउने, अनलाइनमा विक्रि गर्ने
४ सय वर्ष पुरानो बुद्धको मन्दिरमा ‘रोबोट’ पुजारी भएपछि...